आखिर भेडा को हो त? अभिभावक त्यागेर के पाए? - Nepali Milsally
नेपालीहरुको लोकप्रिय शब्दमा “भेडा” भन्ने शब्द पनि पर्छ। नेपाली भाषा र व्याकरण को ठूलो ज्ञानी त होइन म तर पनि मलाई थाहा छ कि “अरुले जे गर्यो त्यही गर्ने, अरुले जे ठिक भन्यो त्यही ठिक मान्ने र गर्ने व्यक्ति” लाई भेडा भन्ने गरिन्छ । भेडा को हुल हिडेको बेला अगाडि एउटा लौरो तेर्साएर राख्न पर्छ, २-४ ओटा भेडा त उफ्रिएर जान्छन् । तर लौरो निकालिदियो भने पनि बाकी रहेका भेडा त्यस ठाउँमा लौरो नै नभए नि उफ्रिएर जान्छन्। यहीँ नै हो भेडा को मुल पहिचान।
अब लागम् नेपाली भेडाहरु तर्फ । ओली का गोठला ले प्रचण्ड को बन्दकर्ता लाई भेडा भने। प्रचण्डका गोठालाहरु ले ओलीको आमसभा मा भेला हुनेलाई भेडा भन्यो। अरु पार्टीका गोठालाहरुलाई दुबै भेला हुनेहरू भेडा लागे। राजा को समर्थन मा निस्कनेलाई नि भेडा नै माने। आखिर को हुन् वास्तवमा भेडा?
हजुरबुबाले भन्नू भएको काहानी सुनाउन मन लाग्यो। हामी सुकुम्बासी हो रे। हाम्रो घरजग्गा केही थिएन रे। जङ्गल फडानी गरेर हाम्रो हजुरबुवा बस्नु भयो रे। एक दिनको कुरा हो त्यस सुकुम्बासी बस्तीमा श्रि ५ सरकार आउनु भयो रे। हाम्रो हजुरबुबा लगायत अन्य सुकुम्बासीहरुले राजासँग घरजग्गा बनाइ माग्ने निर्णय लिएछन्।
तर त्यश ठाउँको ठुलाबढा भनौदाहरुले त्यसो नगर्न सुझाब दिए। राजासँग त्यस्तो कुरा गर्यो भने त तुरुन्तै मार्ने आदेश दिबक्सिन्छ। मर्न मन छ भने त्यसो गर्दा हुन्छ भनेर ठुलाबडा मान्छेले भनेछन्। आखिर मर्न कसलाई मन हुन्छ र? सारा सुकुम्बासीले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरे।
राजाको सवारी भयो। सबैले आफू खुसि भएको बताए। यो सुनेर सायद राजाले त्यो ठुलाबडा मान्छे जासको कर्तव्य हाम्रो गाउँको रेखदेख गर्ने थियो, उनिहरुलाई बक्सिस पनि दिए होला।
केही समयपछि राजाको फेरि आर्को सुकुम्बासी गाउँमा सवारी भयो। त्याहाका मानिसले आफ्नो दु:ख राजालाई सुनाए। राजाले तुरुन्तै उनलाई घरजग्गा दिने आदेश दिए। आदेश स्वरूप सुकुम्बासी, पुर्जाधनि समेत बने। हाम्रो हजुरबुबा र त्यस गाउँका सुकुम्बासीलाई मनमा चिसो पस्यो। ठुलाबढा को कुरा सुनेर राजाका विरुद्ध कति ठूलो भ्रम पालेर बसेका रहेछौं भनेर थै थै भयो।
तिनै ठुलाबढा आज नेता भए। राजतन्त्र को जरो खनेर फाले। त्यो पनि सोझा नेपाली जनता र राजा विरुद्ध झुठा जाल खेलेर। आफू धनी भए जनता गरिब बनाए। अझ पनि यो पार्टी र त्यो पार्टी गर्दै उफ्रिन्छन्। यो त त्यहि सुरुमा भनेको जस्तै लौरी हटाइसके पछि पनि ऊफ्रिने भेडापन्ती भयो।
आफ्नो मुल अभिभावक लाई आफ्नो समस्या बताउन नसकेर, आफ्नै अभिभावकलाई लात हानेर निकालेका भेडाहरुलाई अब सम्हाल्न सायद गार्‍हो नै पर्छ होला। अब त बुझ्नु भयो होला नि। हामी सबै भेडा नै हौँ ।
Previous Postकाँग्रेस संयुक्त आन्दोलनमा जाँदैन: महामन्त्री कोइराला
Next Post‘राम तेरी गंगा मैली’ फेम बलिउड अभिनेता राजीव कपूर 58 वर्षको उमेरमा हृदयघातको कारण मृत्यु
Pingback: यो गणतन्त्रेको नौटङकी नाटक भन्दा त राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र नेपालको लागी हजारौ गुणा सही - MilSally